तमु समाज युकेको १४ औं स्थापना दिवस : 'म अत्यन्तै गौरवान्वित छु' - GurkhaMediaतमु समाज युकेको १४ औं स्थापना दिवस : 'म अत्यन्तै गौरवान्वित छु' - GurkhaMedia
तमु समाज युकेको १४ औं स्थापना दिवस : ‘म अत्यन्तै गौरवान्वित छु’
तमु समाज युके गुरुङहरुको भाषा, कला, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आजभन्दा १४ वर्षअघि ३० सेप्टेम्बर २००७ सालमा लण्डनको वेम्लीमा तमुधिं लण्डन इकाईको रुपमा स्थापना भएको हो । समय र परिस्थितिका कारण सन् २०१२ सालको जुलाई महिनामा तमु समाज युकेको नामकरण गरी बेलायतको च्यारिटीमा दर्ता भयो । सामाजिक संस्थाको रुपमा आफ्नो परिचित बनाउँदै आएको तमु समाज युकेले विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्दै १५ वर्षमा प्रवेश गर्न पाउँदा समाजको संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले म अत्यन्तै गौरवान्वित भएको छु ।
सर्वप्रथम त यस संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन अथक् परिश्रम गर्ने समाजका अध्यक्ष शिवकुमार गुरूङज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष शिवचन्द्र गुरुङज्यू, पूर्वअध्यक्षहरु शिवशरण गुरुङज्यू, अर्जुनकुमार गुरुङज्यू, सल्लाहकारज्यू, हालसम्मका सबै कार्यसमिति, आमा समूह, युवा समूह, आजीवन सदस्य र शुभचिन्तक समाजका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक बधाई तथा धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु ।
मलाई संस्था स्थापना भएको हिजो जस्तो लाग्छ । सुरुमा हामी थोरैजना मात्र समाजमा संगठित थियौं । हामी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि निःस्वार्थ भावनाले अगाडि बढ्दै आयौं । परिणामस्वरुप स्थापनाको १४ वर्षमा हामीले धेरै काम गर्न सफल भएका छौं । आफ्नो कला र संस्कृतिको जगेर्ना मात्र होइन, हामीले सामाजिक कामलाई पनि जोड्दै आएका छौं । अरु समुदायसँग पनि मित्रता गाँस्दै आएका छौं । नेपाल आमालाई दुखेको बेला मलहम लगाउँदै आएका छौं । युवा र महिलाहरुलाई जागरुक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सुरुवात गरेका छौं ।
हामीले गुरुङहरुको मुख्य पर्व ‘ल्होछार’, महिलाहरुको तीज पर्व, वैशाक पूर्णिमा तथा बुद्ध जयन्ती, खेलकुद, जेष्ठ नागरिक भ्रमण, देउसी–भैलो, डिनर नाईटजस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, अर्को हाम्रो महत्वपूर्ण काम भनेको परोपकारी कार्य । नेपालमा महाभूकम्प गएको अवस्थामा हामीले पीडितहरुलाई आफूले सकेको सहयोग गर्‍यौं । बाढी पहिरोपीडित, मिर्गौलापीडित, विभिन्न रोगबाट पीडित हाल कोरोनाका महामारीको समयमा पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि चार लाखभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएको र गुरुङमात्र होइन अन्य समुदायका पीडितहरुलाई सहयोग गर्न सफल भयौं ।
हामीले बेलायतमा रहेका अन्य संघसंस्थाले आयोजना गरेको विभिन्न च्यारिटीमूलक कार्यक्रममा सहभागी भई समाजको तर्फबाट सहयोग गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, हामीले नेपालको विभिन्न स्थानमा शिक्षा, खानेपानी र खेलकुदको क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्दै आएका छौं । हामीले नेपालमा रहेका तमु संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यस विदेशीभूमिमा हाम्रो भाषा, कला, संस्कृति र पहिचान त हराउँदैन ? भन्ने हामीमा ठूलो चिन्ता थियो । त्यसैलाई हृदयंगमन गर्दै हामीले समाजको स्थापना गरेका हौं । र, अहिले समाज हाम्रो उद्देश्यअनुरुप सफलताको बाटोमा हिँडिरहेको अवस्था छ । तर, यत्तिकैमा हामीले सन्तोष गरिहाल्ने दिन भने आइसकेको छैन । अझै पनि हामीसँग चुनौतीका चाङ छ्न् । हाम्रो मौलिक परम्परा र पहिचानलाई भोलिसम्म जीवन्त राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भावी सन्ततीले आफ्नो भाषा, कला र संस्कृतिप्रति चाख राख्छन् वा राख्दैनन् ? उनीहरुलाई कसरी आफ्नो कला र संस्कृतिबारेमा बुझाउन सकिन्छ ? भन्ने चुनौती अझै पनि हामीबीच विद्यमान छ ।
हामीले अहिलेसम्म गुरुङहरुको कला र संस्कृतिमा आधारित कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आएका छौं । तर, त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा दोस्रो पुस्ता अर्थात् छोराछोरी तथा भाञ्जाभाञ्जीहरुले त्यती चासो राखेको देखिँदैन । उनीहरुलाई कसरी त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा आकर्षण गराउन सकिन्छ, सो सम्बन्धमा सोच्न र आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु । हो, हामीले आयोजना गर्दै आएको विभिन्न कार्यक्रमहरुमा केही युवावर्गको सहभागिता रहेको छ तर पनि हामीले सबै दोस्रो पुस्ताका सन्तानहरुलाई आकर्षित गर्न अझै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हामी पहिलो पुस्ताको अभिभावकको हैसियतले हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरिरहेका छौं । हामीले आफ्नो भाषा, कला र संस्कृति जर्गेना गर्नका लागि आवश्यक पहलकदमीको थालनी गरेका छौं । समाज स्थापना भएको १४ वर्षमा हामीले थुप्रै परोपकारी काम गरिसकेका छौं । देश र समाजलाई योगदान दिने महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान र सत्कार गरिरहेका छौं । समाजको विकासमा योगदान दिने समाजका सदस्यहरुलाई पनि हामीले हौसला स्वरुप सम्मान गर्दै आएका छौं । विद्यार्थीहरुको हौसलामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यका साथ शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति गरेका भाइबहिनीहरुलाई सम्मान गर्दै आएका छौं । नेपालबाट बेलायत आउने पाहुनाहरुको स्वागत तथा सत्कार गर्ने परम्पराको पनि हामीले थालनी गरेका छौं ।
अन्त्यमा, तमु समाज युकेलाई मार्गदर्शन गर्दै यहाँसम्म ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने समाजका पूर्वअध्यक्षज्यूहरु, सल्लाहकारज्यूहरु, कार्यसमिति, आमा समूह, युवा समूह, आजीवन सदस्य र शुभचिन्तकज्यूहरुमा संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनहरुमा पनि यहाँहरुको समाजप्रति साथ र सहयोग गरिरहोस् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, समाजले पनि आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । गुरुङ भाषामा भनिन्छ, ‘प्ये म्हस्याँ छ्या ममु, छ्या म्हस्याँ ल्हु ममु, ल्हु म्हस्याँ म्ही ममु’ अर्थात् ‘परम्परा हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए पहिचान हराउँछ’ त्यसैले आफ्नो परम्परा, संस्कार, संस्कृति र पहिचानलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले हाम्रो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजानु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।